WHO oo sheegtay in ay korortay dadka nafsad ahaan xariga isku Dilaya – Banaadir weyne
WHO oo sheegtay in ay korortay dadka nafsad ahaan xariga isku Dilaya
Geneva – Ku dhowaad 800,000 oo ruux ayaa sanad waliba is qaarijiya,taasi oo ka badan dadka ku dhimanaya dagaalada iyo amni darada ka taagan qeybo ka mid ah caalamka.
Warbixin ay soo saartay hey,ada qaramada midoobay u xilsaaran dhanka caafimaadka Aduunka ee loo yaqaan WHO, ayaa lagu sheegay in dadka u dhimanaya cudurka Cancer-ka ee ku dhaca naasaha iyo rasaasta tooska ah ay ka badan tahay Tiradaaan.
Agaasimaa guud ee WHO Mr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa warsaxaafadeed uu saaray isniinta maanta ku sheegay in 40-kii ilbiriqsi uu hal qof is dilo, taasi oo masiibo ku ah qoysaska iyo asxaabta ruuxa Isdilay.
Dhanka kale baaq ka soo baxay mas,uuliyiinta hey,adan oo fadhigeedu yahay magaalada Geneva ayaa ugu baaqay in wadamada caalamka ay talaabo u qaadaan wax ka qabashada Arintaan.
WHO ayaa sidoo kale sheegtay in falalka isdaldalaada ah ay sare u kacday sanadkii 2010-kii ilaa 2016-kii, balse aan la dareemin sababo la xiriira kobaca dadyowga caalamka oo sare u Kacday. – Universal TV Somali